Momba ny safidy | FAQ | safidy
NY sehatry ny media sosialy ho amin'ny ho avy tsara kokoa.
Fiarahamonina any amin'ny firenena rehetra
Aoka ho mpitati-baovao an'izao tontolo izao - ary vakio manerana izao tontolo izao!
Fomba fijery hafa tanteraka
avy amin'ny fomba fijery maharitra sy ny fiarahamonim-pirenena.
mba hamahana ireo olana misy eto amin'izao tontolo izao.
Tsy mankahala, tsy misy antoko politika
Vaovao manorina sy mifototra amin'ny ho avy tsy mieritreritra fahefana sy tombony azo antoka.
Tsy misy sakana amin'ny fiteny
Nadika ho azy ireo sy ny fiteny hafa rehetra.
Fizarana maneran-tany sy maimaimpoana
Mety hahatratra ny olona rehetra ny lahatsoratranao fa tsy ny mpanara-dia anao na ny mpikambana ao aminy ihany.
Safidy dia orinasa iray mahaliana ho an'ny daholobe manana iraka sivily, tsy misy fitsiriritana na mpampiasa vola.
Tena mahaleo tena
Satria ny teti-bola safidy, tsy misy famatsiam-bola na fitaomana ho an'ny daholobe.
Orinasa maharitra maharitra
ao amin'ny lahatahiry iraisam-pirenena sy ny taratasy fanamarinana lehibe indrindra.
Ny vokatra maharitra ihany
miaraka amin'ny fihenam-bidy sy fampiroboroboana ny fanjifana mahatsiaro tena.
natokana ho an'ny orinasa etika sy maharitra ihany, fa ny safidy ara-bola ihany.
Inona no safidy.news
option.news dia "sehatra media sosialy" tsara indrindra momba ny faharetana sy ny fiarahamonim-pirenena, izay amboarina amin'ny alàlan'ny dingana eran-tany. Afaka misoratra anarana eto ny rehetra ary mametraka lahatsoratra ho amin'ny ho avy tsara kokoa.
Inona no tadiavin'ny safidy.news
Mifanaraka amin'ilay tarigetra hoe "mamorona hoavy tsara kokoa", ny safidy.news dia tokony handray anjara amin'izany amin'ny fanomezana vaovao momba ny faharetana sy ny fiarahamonim-pirenena ho an'ny sy ny olona liana. Saingy ny safidy.news dia maniry ny hanosika azy ireo hiatrika ireo lohahevitra ireo. Manolo-tena ho amin'ny ho avy maharitra isika, ny fanjifana mahatsiaro tena, fampandrosoana bebe kokoa ny demaokrasia sy ny hery manentana hafa maro.
Inona no azon'ny safidy.news?
nadika ho azy ireo na saika ny fiteny rehetra eto amin'izao tontolo izao ary azon'ny rehetra ampiasaina amin'ny tenin-drazany.
dia manolotra vaovao mahaliana sy mampiavaka avy amin'ny saika ny firenena rehetra
manaparitaka ny eritreritr'izy ireo sy ny adihevitra maneran-tany, fa tsy amin'ny olona mitovy hevitra ihany!
dia fiarahamonina manerantany mahomby amin'ny olona manokan-tena & mpanjifa mahatsiaro tena
maimaimpoana tanteraka, misokatra amin'ny rehetra ary manana rafitra misokatra tsy mila takiana vakiana
dia natao manokana amin'ny famatsiam-bola irery, tsy misy fitsiriritana ary orinasa tokana tsy misy mpamatsy vola
dia manome toro-làlana maharitra amin'ny fihenam-bidy maharitra sy fihenam-bidy marobe
dia manome lisitry ny orinasam-barotra etika sy maharitra ary azo atokisana
Te hanohana safidy.news aho
Ny olona tsy miankina dia afaka manome antsika fanohanana...
miaraka amina vola tokana. Mandefasa mailaka fohy ho an'ny editorial [AT] dieoption.at
miaraka amin'ny Mametraha famandrihana ny gazety alemà-miteny alemà
miaraka amin'ny baiko Fivarotana safidy.
miaraka amin'ny 99 Euro tsy manam-paharoa - izany no ilain'ny Gazety pirinty Option ho an'ny mandrakizay!
miaraka am-bava sy fanaparitahana ao amin'ny media sosialy!
amin'ny alàlan'ny fampiasana option.news amin'ny maha mpikambana mavitrika azy ireo
Afaka manohana antsika ireo orinasa maharitra ...
avy amin'ny Midira amin'ny "opération Network" amin'ny maha-mpikambana mpanohana - ny vola 350 Euro ihany. Tafiditra ao ireo tombotsoa sasany, ao ny fidiram-bola ho an'ny dokambarotra amin'ny vola mitovy.
amin'ny doka amin'ny Option Medien.
Maninona aho no tokony handefa safidy?
Raha fintinina: Satria mitombina izany. option.news te-hameno ny Internet amin'ny votoaty tsara sy manorina. Mifanohitra amin'ny safidy "sehatra haino aman-jery sosialy" mihidy dia sehatra iray tsy misy fisoratana anarana, ary ny fandraisana anjara dia ampiharin'ireo milina fikarohana ihany koa. Tsy mahatratra ny mpanara-dia anao fotsiny ianao fa mety ho an'izao tontolo izao. Mahatonga saina, sa tsy izany?
Ahoana no ifandraisan'ny rafitra?
Amin'izany fomba izany, te hamporisika ny fandraisana anjara mavitrika isika ary hanasa ny olona hiatrika ireo lohahevitra tsara. Ho an'ireo hetsika maro amin'ny maha-mpikambana voasoratra anarana dia mahazo isa ianao. Ireo dia azo ampiasaina amin'ny fivarotana manohitra ireo kaonty fihenam-bidy ary na dia ny fankatoavan'ny fiarahamonina avy amin'ny vokatra maharitra.
Azoko averina apetraka?
Tsy misy fetrany misy raha toa ka manaraka fitsipika vitsivitsy vitsivitsy ianao. Ny fandraisana anjara rehetra dia apetaka amin'ny fomba manual:
Mazava ho azy fa avela hitsikera ny fanao
Tsisy lafin-javatra, tsy fanavakavahana, tsy fanompana
Tsy misy dokam-barotra mivantana, fa manana habaka foana ny tolo-kevitra
Tsy manao politika ny antoko
Mety ho zavatra ny lahatsoratra:
Fanavaozana, hevitra ary hevitra tsara
hetsika an-trano misy ankehitriny ao amin'ny firenenao
soso-kevitra amin'ny ankapobeny momba ny fomba mety hahitana tsara kokoa
Iza no ao ambadiky ny safidy.news?
Ny safidy dia efa naorina 2014, ary novolavolaina ho sehatra media sosialy eo ambany safidy.news 2019, nosoratan'ny mpanao gazety Australiana Helmut Melzer (jereo fanambarana) na avy amin'i Option Medien, ilay orinasa tokana nataon'i Helmut Melzer. option.news dia fampivoarana fanampiny amin'ny sehatra Aostraliana Austro tany am-boalohany. Eto azonao atao hampahafantatra momba ny fampandrosoana ankehitriny.
Orinasa ve ianao?
Marina fa tsy fikambanana na NPO isika - zavatra vaovao vaovao izahay. Ho an'ny orinasam-be toa anay dia tsy mbola misy mpitsara. Izahay dia mahita ny tenantsika ho orinasam-bahoaka mifantoka amin'ny vahoaka miaraka amin'ny fehezin'ny fiarahamonim-pirenena - tsy mila tombony voalohany indrindra.
Taorian'ny taona niarahan'ny olana momba ny faharetana sy ny fiarahamonim-pirenena dia resy lahatra isika fa ny làlan'ny sehatra tsy miankina irery no hany miasa ho antsika: amin'ny fanompoana ny fiarahamonim-pirenena, ny fahaleovan-tena tanteraka dia tsy ho vita raha tsy misy fanohanana sy fahatokisan-bahoaka. Miasa irery izahay miaraka amin'ny orinasa manana etika sy maharitra, mitovy hevitra ary maniry ny hihetsika nefa tsy misy fanomezana.
Raha ara-bola dia tsy mifototra amin'ny tombom-barotra ihany isika fa mazava ho azy anefa dia mila mandoa vola sy fandaniana. Ary misakafo koa ianao ...
Izany no mahatonga antsika:
+ Mitsangana izahay mba hisian'ny fampandrosoana tsara ho an'ny fiaraha-monina
ary aparitaka manerantany
+ Tsy fehezin-tombom-barotra fotsiny izahay fa ataontsika tsara
+ Samy mahaleo tena tanteraka isika amin'ny zavatra hafa avy amin'ny kitapom-bolam-panjakana, ny masoivohon'ny governemanta ary ny toekarena nentim-paharazana.
+ Manana fahefana amin'ny fanapaha-kevitra maimaim-poana izahay amin'ny tanjonay sy ny fandraisana andraikitra
+ Izahay tia tena idirana ary mpiara-miasa matoky tena
+ Tsy misy idiran'ny antoko politika izahay
Ahoana ny famatsiam-bola.news?
option.news, Option magazine print, vatsian'ny vola amin'ny alàlan'ny mpanjifa sy ny dokam-barotra avy amin'ny orinasa mitovy hevitra, etika ary maharitra. Tsy mora izany ary raha ny marina dia zara raha mitantana ny fanarenana ny sarany isika. Na eo aza izany dia mbola mafana fo be amin'ny safidy isika ary mahita izany hoe misy tombony lehibe ara-tsosialy tokoa. Miaraka amin'ny fahafahana vaovao ho an'ny orinasa maharitra ho lasa mpikambana mpanohana, manandrana mandavona ity tolona tsy miovaova ity isika raha misy kely.
Mendrika vola amin'ny dokam-barotra ianao!
Eny, amin'ny option.news dia misy ny doka, fa avy amin'ny orinasa maharitra ihany. Mba hahafahan'izy ireo mihetsika matihanina ary mitoetra amin'ny lafiny ara-teknika amin'ny ambaratonga farany, ilaina ny vola ara-bola. Izahay dia tsy manao fanomezana sy vola fanampiana amin'ny fanjakana.
Ny teti-bolantsika isan-taona - ho an'ny haino aman-jery an-tserasera sy ny fanaovana pirinty - dia mihoatra ny 70.000 Euro izay azo vatsy amin'ny alàlan'ny fanohanana orinasa maharitra.
Tsy dia tsara ny dikan-teny
option.news natadika ho saika ny fiteny rehetra amin'ny alàlan'ny fitaovana maoderina. Izy io dia miasa amin'ny fotokevitra efa lehibe, satria tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia nisy fandrosoana lehibe izay natao teto. Na izany aza, mety misy ny fahasahiranana, ohatra hoe rehefa ampiasaina ny fehezanteny iray, izay tsy mahazatra amin'ny fiteny rehetra, na ny fehezanteny manjavozavo. Ny tena ifantohanay dia ny fahazoana ny fahalalana fototra, izany hoe: Ny farafaharatsiny azo atao dia ny azo atao hoe ny dikany sy ny fototry ny fandraisana anjara iray dia mahatakatra ao amin'ny fandikana ihany koa. Hitombo tokoa ny kalitaon'ny fandikan-teny.